၂၀၀၈၊ ရန်ကုန်-နေပြည်တော်-မန်းလေး-ပုဂံ-ရန်ကုန်၊ အပိုင်း (၂)	(ပထမရက်)
၁၀း၃၀ ဖြစ်သွားရော…… ပြန်ဖို့ပြင်…. နောက်ဖြူလေးအတွက် ဒိန်ချဉ်ဝယ်….ကံဆိုးချင်တော့ ဆိုင်ကမပိတ်သေးဘူး……….ဒိန်ချဉ်ဝယ်ပီး…. ဖြူလေးဆိုင်ကိုသွား….သူကမရှိတော့ဘူး…အဲဒါနဲ့ဆိုင်ရှေ့မှာ ဒိန်ချဉ်အထုပ် ကိုဒီအတိုင်းချိတ်ခဲ့တယ်… နာဇီကငါ့တည်းခိုခန်းရှေ့အထိလိုက်ပို့ပေးပီးမှ သူပြန်သွားတယ်…..ငါလည်းရေချိုးပီးအိပ်တော့တာပဲ… (ဆက်ရန်…….)